0% WAX FEE AHI MA SAARNA DHIGAALKA IYO LA BIXITAANADA
LACAG AMAAN AH, SHATI & MAAMULID LEH
FXPRIMUS, waxaan fahamsanahay in mid kastoo kamid ah ganacsatadayada ay leeyihiin xaji maalgashi, nooca maalgashi, istiraatiijiyada ganacsi ee shaqsiyeed. Waxaan daboolna baahiyaha ganacsatadayada anagoo u abuurayna noocyo kala duwan oo akoono ah oo dhameystiri doona shuruudaha ganacsi eed u baahan tahay.
FURO AKOON DHABTA AH
(REAL ACCOUNT) FURO AKOON TIJAABO AH
Fulin degdegsiimo leh nooc kasta oo akoonku yahay
Shakhsiyeed, Caawimaada Shaqaalaha Luuqadaha kala duwan ku hadla 24/55
Helitaanka qalabyo kala duwan oo ganacsi oo horumarsan
Helitaanka boggga casharada oo bilaash ah
Xaaladaha ganacsi ee amaanka ah
Caymiska Khasaaraha Caalamiga ah oo gaadhaya ilaa 2.5 milyan oo lacagta euro ah
Shakhsiyeed, Caawimaada Shaqaalaha Luuqadaha kala duwan ku hadla 24/5
Wax Ku saabsan Akoonka DEMO ah ee FXPRIMUS
Akoonka Demo ga ah ee FXPRIMUS wuxuu siiya ganacsatada fursadda ay ku afeyn lahayeen xirfadahooda ganacsi iyagoo isticmaalaya barnaamijyada ka turjumaya baahidooda si ay u noqon karaan ganacsato kalsooni iyo guul gaadha. Ganacsatada khibrada leh waxaa sidoo kale lagu soo dhaweynayaa inay isku tijaabiyaan akoonka demo ga ah si marka ugu horeysaba u dareemaan xasiloonada amni ee deegaankayaga ganacsi. Dhamaan ganacsatada cusubi waxay fursad u heli doonaan inay kusoo wareegaan deegaankyaga ganacsi ee MT4 isticmaalayana WebTrader kaas oo aan uga baahneyn inay lasoo dagaan, waxa aanad ka isticmaali kartaa aalad kasta adoo u baahan khad internet ah.
Booqo FXPRIMUS MT4 WebTrader
Furo Akoon Tijaabo ah (Demo Account)
Wax ku Saabsan FXPRIMUS Variable Account
Ganacsiga Forex, badeecooyinka, tamaraha, iyo indices adoo adeegsanaya FXPRIMUS Variable Account, oo ogow deegaanka ganacsiga amaanka ee live ka ah. Haystaha AKoonka Varibale ka ah, waxa uu heli doonaa adeegyo waxbarasho oo bilaash a, oo kaa caawinaya inaad gaarto go'aamada ganacsiga oo cilmiyaysan, inta waxa dheer qalabyo ganacsi oo gaar ah oo ay heli karaan oo kaliya ganacsatada FXPRIMUS. Haystayaasha akoonnada Variable ka ah ayaa sidoo kale ka faa'iideysta ganacsiyada ka maran commission..
FURO AKOON VARIABLE AH
Ka ganacsiga badeecadaha marginka
leh waxa ku jirta khatar sare
Ka ganacsiga badeecadaha margink
Wax ku saaban FXPRIMUS ECN Premium Account
Akoonka ECN Premium FXPRIMUS waxaa loogu talagalay macaamiisha haysta maalgashi ka badan 500 doolar. Waxaan bixinaa helitaan aan dhamaad lahayn dhammaan adeegyadayada gaarka ah oo ay ku jiraan fariimaha SMS iyo Signaliska Ganacsi, oo ka caawinaya ganacsadaha inuu gaaro go'aamo waqti ku saleysan. Haystaha Akoonka ECN Premium waxaa sidoo kale laga taageerayaa istaraatiijiyada ganacsi iyada oo la adeegsanayo seminaarada ganacsiga maaliyadeed ee sida xogaha usbuuc laha ah iyo spreadka ugu hooseeya oo ka bilaabmaya 0.
FURO ECN AKOON